Ooredoo Myanmar - iflix
အူရီဒူးနဲ့ iflix ပူးပေါင်းပြီး တစ်ခါမှမရှိဘူးသေးတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအစီအစဉ်ကိုယူဆောင်လာပါပြီ
ထောင်ပေါင်းများစွာသော တီဗီအစီအစဉ်များ၊ ရုပ်ရှင်များ နှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်များကို အကန့်အသတ်မရှိခံစားလိုက်ပါ။
iflix သည် ဗီဒီယို များကို လစဉ်ကြေးပေးပြီး ကြည့်ရှုနိုင်သော ထိပ်တန်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများကို ကမ္ဘာအနှံ့မှ ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗွီ အစီအစဉ်များကို အကန့်အသတ်မရှိ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။ iflix တွင်သာ အရင်ဦးဆုံး ကြည့်ရှုနိုင်မည့်အစီအစဉ်များ၊ ဆုများစွာ ရရှိထားသော တီဗွီအစီအစဉ်များ နှင့် ရုပ်ရှင်များ၊ နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ရုပ်ရှင်များ ကိုရွေးချယ်စရာ အစုံအလင်ဖြင့် လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါပြီ။
အူရီဒူး သုံးစွဲသူများအတွက် ၁,၈၀၀၀ကျပ် တန်ဖိုးရှိသော iflix ကို ၆လ လစဉ်ကြေးပေးစရာမလိုပဲ သုံးစွဲခွင့်ကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။
iflix ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူရန် *600# သို့ခေါ်ဆိုပါ ပြီးလျှင် အစီအစဉ်ကို ရယူရန်ကိုနှိပ်ပြီး ခံစားခွင့်များကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
iflix application ကို အူရီဒူး ဒေတာအသုံးပြုပြီး ပေါ်လာသော ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းရယူနိုင်ပါသည်။
iflix တွင် လစဉ်ကြေးစတင်ပေးချေသည့်နေ့ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ။
Account menu ထဲရှိ My Plan အောက်တွင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
iflix application ကိုဘယ်လို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်သလဲ။
မိတ်ဆွေသည်အူရီဒူး၏အထူးအစီအစဉ်ဖြင့် iflixဝန်ဆောင်မှုကို၆လဝန်ဆောင်ခအခမဲ့အသုံးပြုပြီးသူဖြစ်လျှင် မိတ်ဆွေအတွက် နောက်ထပ်အထူးဈေးနှုန်းသက်သာသောကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
iflixဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျသင့်ငွေကို အူရီဒူးဖုန်းငွေဖြင့်ပေးချေလိုက်ပါ။ ဝန်ဆောင်ခကျသင့်ငွေမှာ
iflix အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ် web browser https://www.iflix.com/#uLhkzfiZmFdfLBZj.97 မှ ဝန်ဆောင်မှုကိုစာရင်းသွင်းပါ။
All you have to do is download the iflix app by dialing *600#ညာဘက်အောက်ဘက်ထောင့်ရှိ “More” menu ကိုသွားပါ။
နှစ်စဉ်ကြေး ၃၆၀၀၀ကျပ် (သို့) ၃လစာ ၉၀၀၀ကျပ် (သို့) လစဉ်ကြေး ၃၀၀၀ကျပ် ကိုရွေးပါ။
ငွေပေးချေရန် “အူရီဒူး” ကို ရွးပါ။
“Unlock VIP”/Subscribe ကိုနှိပ်ပါ။
Account သို့သွားပါ » My Plan
ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။ iflix တွင် ဟာသအစီအစဉ်များ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများ၊ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများ၊ ကာတွန်းများ အပြင် ဟောလိဝုဒ်၊ UK၊ အာရှ နှင့် အခြားနိုင်ငံများမှ ရုပ်ရှင်များ ကိုရွေးချယ်စရာအစုံအလင်ဖြင့် နှစ်သက်ရာ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ လက်ပ်တော့ပ်၊ တီဗီ တို့တွင် လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါပြီ။
အူရီဒူးအသုံးပြုသူများအတွက် iflix ကို ၆လ (၁လလျှင် ၃၀၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ၆ လစာ ၁၈၀၀၀ ကျပ်တန်ဖိုးရှိ) လစဉ်ကြေး ပေးစရာမလိုဘဲသုံးစွဲခွင့်ရရှိပါမယ်။
အူရီဒူးရဲ့ iflix အစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ။
iflix ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ (*600#)
အူရီဒူးဒေတာကိုအသုံးပြုပြီး iflix app ကို ဖွင့်ပါ။
အစီအစဉ်အတွက် pop-up ပေါ်လာပါမယ်
အူရီဒူး ဒေတာ ကို အသုံးပြုပါ။
iflix ကို login ဝင်ပြီး logout ပြန်လုပ်ပါ။
Data saving mode ကို ပိတ်ထားပါ။
မရပါက support+mm@iflix.com ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။/ iflix (MM) Facebook Page ရဲ့ Messenger မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။
မရရှိသေးပါက အူရီဒူးသို့ ၂၃၄ မှ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
အူရီဒူးကပံ့ပိုးပေးထားတဲ iflix လစဉ်ကြေး အခြေအနေ ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ။
iflix app ကိုဖွင့်ပါ။
Main menu သို့သွားပါ။
“Account” » “My Plan” ကိုရှာဖွေပါ။
မိတ်ဆွေသည် အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးခြင်းကို ရွေးချယ်ထားပါက တစ်လအတွက် လစဉ်ကြေး ၃၀၀၀ကျပ်ဖြင့် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးသွားမှာဖြစ်လို့ iflix မှာ အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ဆက်လက်ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်မှာပါ။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုကို အနည်းဆုံး ၁ ရက် ကြိုတင်အကြောင်းကြားသွားပါမည်။
လစဉ်ကြေးပေးစရာမလိုပဲ ကြည့်ရှုခွင့် ၆လတာ ကာလကုန်ဆုံးပြီး သက်တမ်းဆက်လက်မတိုးချင်လျင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
အလိုအလျောက်သက်တမ်းမတိုးခင်ပေးပို့သော SMS အကြောင်းကြားစာတွင် စာရင်းသွင်းမှု ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက် ပါဝင်ပါတယ်။
iflix ပေါ်မှာ ဗီဒီယိုကြည့်လို့မရပါဘူး။
Internet connection ကိုစစ်ဆေးပါ။ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဒေတာအစီအစဉ်များမှ လက်ကျန်များကိုစစ်ဆေးပါ။ သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီးပါက ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ လုံလောက်စွာရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
မိတ်ဆွေသည် အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးခြင်းကို ရွေးချယ်ထားပါက သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ iOS iflix အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုစာရင်းသွင်းရန်ခလုတ်ကိုရှာမတွေ့ပါ။
iOS devicesများတွင် ဝန်ဆောင်မှုစာရင်းသွင်းရန်အတွက် အောက်ပါလင့်ခ်ကိုအသုံးပြုပါ။ https://www.iflix.com/#uLhkzfiZmFdfLBZj.97
မိတ်ဆွေသည် နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသော iflix အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုရပါမည်။ လင့်ခ်ရရှိရန် *600#ကိုခေါ်ဆိုပါ။
Android application: http://bit.ly/2cQgF5r
“Account”မှတစ်ဆင့်“My Plan” ကိုသွားပါ။ မိတ်ဆွေေ နာက်တစ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးမည့်နေ့ရက်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁. အူရီဒူးမြန်မာ iflix အစီအစဉ် နှင့်အတူ ရရှိမည့်အခွင့်အရေးများ - ၆လစာ လစဉ်ကြေး (iflix မှ ကမ်းလှမ်းထားသော အစမ်းသုံးခွင့်ကာလ၁လ အပြင်)
၂. အစီအစဉ်ကိုရယူရန် - အူရီဒူး ဆင်းကတ်ကိုအသုံးပြုပြီး လစဉ် ၄၀၀၀ ကျပ်အသုံးပြုရပါမည်။ - အူရီဒူး ဒေတာကိုအသုံးပြုပြီး iflix ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုရပါမည်။
၃. အခမဲ့ခံစားခွင့်ကာလ ကုန်ဆုံးပြီး နာက်လမှစ၍ စာရင်းသွင်းခြင်းကို တစ်လလျှင် ၃၀၀၀ကျပ် ၊ သုံးလလျှင် ၉၀၀၀ကျပ်နှင့် ၁၂လလျှင် ၃၆၀၀၀ကျပ်ဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၄. ပုံမှန်အင်တာနက်အသုံးပြုခများအတိုင်း ပေးဆောင်ရပါမည်။
၅. ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ပါဝင်ပြီးဖြစ်သည်။
၆. ဖော်ပြပါဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ယခုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိသုံးစွဲသူထံ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲ အချိန်မရွေး ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်၊ ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်သည် အူရီဒူးမြန်မာလက်ဝယ်တွင်ရှိသည်